Ministry of Labor and Social Affairs – Somali Government – Shir looga hadlay Xaalada wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshda oo ku saabsan guulaha sanadkii tagan iyo qorshaha sanadkan cusub ee 2017 oo lagu qabtay xarunta Wasaaradaasi
Shir looga hadlay Xaalada wasaaradda shaqada iyo Arrimaha Bulshda oo ku saabsan guulaha sanadkii tagan iyo qorshaha sanadkan cusub ee 2017 oo lagu qabtay xarunta Wasaaradaasi
Abdirashiid Heydara January 4, 2017 Comments Off
Xoghayaha Joogtada wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada mudane Xasan Shariif Cusman oo shir gudoominayo kulanka ayaa sheegay in uu ku saabsan yahay shirkan guulaha ay gaartay Wasaaradda 2016 iyo qorshe howleedka shaqo ee sanadkan cusub 2017 sidii looga tashan lahaa iyo isbedelka ka imaankaro siyaasada iyo madaxda dalka .
Shir ayaa lagu casuumay dhammaan Agaasimayaasha waaxyaha ee Wasaaradda. waxaana ka hadlay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Mudane Maxamed Cadde Muqtaar waxuuna aad ugu dheeraaday guulaha ay gaartay wasaaradda sanadkii tagay 2016 iyo Mashaariicda shaqo ay fulisay Wasaaradda.
Agaasimaha Guud ayaa yiri “ waa in loo saaraa guddi soo diyaariyo sidii wax looga qaban lahaa qorshe howleedka sanadkan cusub 2017” sidaana waxaa yiri Maxamed Cadde Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.
Agaasimaha Waaxda Shaqaalaha Gaarka ah iyo Muhaajiriinta mudane Cabdirisaaq Macalin Cilmi oo aad u soo dhaweeyay muhiimada uu leeyahay shir iyo in uu yahay shir xasaasi ah oo looga hadlayo danaha wasaaradda. Waxuuna soo jeediyay in Xayeeysiin loo sameeyo wax qabadka guulaha leh oo ay gaartay wasaaradda ayadoo la adeegsanayo Saxaafada iyo Buugaag lagu soo bandhigayo wax qabadka wasaaradda shaqada iyo arrimaha Bulshada.